तनहुँको भिमाद नगरपालिका–९, पाथर्दीमा व्यावसायिक रुपमा पालिएको बोयर जातका बाख्रालाई दाना खुवाउँदै कृषक
चैत २५, तनहुँ । तनहुँ जिल्लाको भिमाद नगरपालिका–९ पाथार्दीका बाख्राफार्म पशुपालन कृषकका लागि अवलोकनस्थलका रूपमा विकास हुँदै गएको छ ।
उक्त क्षेत्रमा विभिन्न क्षेत्रबाट बोयर जातको बाख्रा पाल्ने तरिका सिक्नका लागि प्रायः दैनिक पशुपालन कृषक अवलोकनका लागि आउने गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कृषि नमुना गाउँका रूपमा घोषणा गरिएको पाथर्दी गाउँलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले बाख्रा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यस क्षेत्रका कृषकले बोयर जातको बाख्रापालन गरेर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन् । अवलोकनका रूपमा पनि विकास हुँदै गएको उनले बताए । करीब सात वर्षको अवधिमा यहाँका बाख्रापालक कृषकले पाथर्दीलाई नमूना कृषिगाउँका रूपमा परिचित बनाउन सफल भएका छन् ।
पराम्परागतरूपमा पशुपालन तथा कृषि पेशा गर्दै आएका यहाँका कृषकले व्यावसायिकरूपमा बाख्रापालन थालेपछि आम्दानीसँगै विकासमा अघि बढेको अगुवा कृषक आलेले जानकारी दिए । गाउँमा शुरुमा बोयर बाख्रा ल्याएर पाल्न शुरु गरेका आलेले अहिले झण्डै रू. ४० लाख मूल्य बराबरका बाख्रा फार्ममा रहेका छन् ।
‘बाख्रापालनबाट राम्रै आम्दानी हुन थालेपछि आफू सन्तुष्ट रहेको छु’, उनले भने, ‘वार्षिकरूपमा रू. १० देखि रू. १६ लाखसम्मको बाख्रा विक्री गर्दै आएको छु ।’
वैदेशिक रोजगारी त्यागेर बाख्रापालनमा भविष्य देखेका युवामध्येका एक कृषक हुन् विनम आले । करीब पाँच वर्ष दक्षिण कोरियामा बिताएका आलेले यतिबेला गाउँमा बोयर बाख्रालगायतका कृषि पेशा गर्न थालेका छन् । ‘परिवारको साथमा बसेर गाउँमै राम्रो आम्दानी हुने भएपछि किन विदेश जानू ? विदेशमा कमाएको पैसा गाउँमै कमाउन सकिने सम्भावना देखेर गाउँ फर्किएको हुँ’, उनले भने । आलेले ३०० कुखुरा र करीब ३५ ओटा माउसहितको बोयर बाख्रा राखेर पाल्न शुरु गरेका छन् ।
कृषि पेशालाई व्यावसायिक बनाउन सके स्वदेशमै राम्रो आम्दानी गर्न सकिने सम्भावना रहेको अर्का कृषक श्रीमाया आलेले बताइन् । वर्षमा रू. १० लाखसम्मको बोयर बाख्रा विक्री गर्ने गरेको उनले बताइन् । ‘श्रीमान्, छोराहरु कसैलाई पनि विदेश पठाएको छैन’, उनले भने, ‘सबै मिलेर काम गर्ने हो भने स्वदेशमै रमाइलो र खुशी हुन्छ ।’
करीब रू. १५ करोडको लगानीमा बाख्रा अनुसन्धान केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको छ । अनुसन्धान केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको वडाध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा रू. ५० लाख बजेट अनुसन्धान केन्द्रका लागि विनियोजन गरिसकिएको छ । रासस